काङ्ग्रेस कार्यकर्ताका सात ‘खराबी’ – Kathmandutoday.com
काङ्ग्रेस कार्यकर्ताका सात ‘खराबी’
काठमाण्डु टुडे २०७० भदौ १८ गते ८:२६ मा प्रकाशित
(वीपी कोइरालाले २०१५ साल अगाडी पार्टीका कार्यकर्तालाई लेखेको पत्र)
तपाईँ साथीहरूलाई धेरै दिनपछि यस्तो किसिमको पत्र पठाउँदैछु । मलाई लाग्दछ, आज यसको आवश्यकता पनि पर्न गएको छ। आज हाम्रो प्यारो देश जसरी नै नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा ठूलो सङ्कटबाट गुज्रँदै छ । यसको पूर्ण निराकरण गर्नमा हामी हाल त्यति र्समर्थ नभए पनि यसका ठीक-ठीक कारणहरूको ठेगान लगाउनु आवश्यक छ।
तर्सथ, हाम्रो पार्टीभित्रका रोगहरू ठेगान लाग्नु आज आवश्यक हुन गएको छ। पार्टीहरु देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाका प्रतिबिम्ब मात्र हुन्छन्। हाम्रो पार्टी पनि त्यस्तै नै हो। नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनताको वास्तबिक प्रतिनिधि हो भने यो निरोगी र स्वस्थ रहेमा हाम्रो देशको एक-एक रोग र व्याधि आफैँ क्रमशः हट्दैजानेछन्। र, यो देश कालान्तरमा विश्वका अरू देश सरह व्यवस्थित र उन्नतशील भएर जानेछ।
तपाईँ साथीहरूले प्रारम्भदेखि नै मप्रति ठूलो विश्वास र प्रेम देखाउनु भएको छ। मैले पनि आफूलाई यसको उपयुक्त बनाउने सकेसम्म प्रयत्न बराबर गरेको छु। तर, मलाई आफ्नो काममा नै न सन्तोष छ, न त तपाईँ साथीहरूको कामबाट नै सन्तोष छ। यसो नभएको भए यस्तो किसिमको पत्र लेख्ने आवश्यक नै पर्ने थिएन। त्यस हुनाले तपाईँहरूको सोही मैत्री र सद्भावका कारणका आधारमा म यो स्पष्ट कुरा लेख्दैछु। र, मलाई आशा छ, यसमाथि तपाईँहरूले अवश्य पनि गम्भीर विचारका साथ मनन गर्नु हुनेछ।
नेपाली काङ्ग्रेसमाथिको ऐतिहासिक उत्तरदायित्वको कुरा म पार्टीका साथीहरूले जहाँसुकै गरेको सुन्दछु। यो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के हो ? हामीले के गर्नुछ ? हामी सबैलाई यसको स्पष्ट वोध नभए जस्तो छ। यसबारे मैले केही विचार गरेँ। मलाई लाग्दछ, नेपालमा क्रान्तिको सफल नेतृत्व गरेर सफलताका साथ कठिन ज्वालामुखीको दुर्गम पहाड चढेर त्यसको अखण्ड ज्वालामा हाम्फालेर पनि अक्षत र सफल भएर निस्केका नेपाली काङ्ग्रेसका क्रान्तिकारी साथीहरू अझै त्यही बितेका सपनाका कथाहरूमा अल्झेर बसिरहेका छन्। अतीत सबैका लागि सुखद र प्यारो हुन्छ। झन् बितेका दिन इतिहासका सुनौला पृष्ठ हुन गएका त्यस व्यक्ति वा संस्थाको के कुरा। तर,यसैले हामीमा आफ्नो साध्य र साधनप्रति नै भ्रम पारेको जस्तो छ। क्रान्ति प्रजातन्त्र प्राप्तिको एउटा साधन मात्र थियो र साध्य त प्रजातन्त्र थियो। साधनको उपलब्धिको उमङ्गमा हामीले यस महत्वपूर्ण कुरालाई बिस्यौर् र अझै त्यही गल्ती गर्दैछौँ। यसैले गर्दा हाम्रो देश प्रजातन्त्रको मार्गमा चाहिने जति अगाडि बढ्न सकेन। वास्तबिक भन्ने हो भने, क्रान्तिजन्य प्रजातन्त्रका प्राप्तिहरू दिनदिनै घट्दै गए। यसले गर्दा क्रान्तिको महत्व पनि कम हुँदै गयो। यस कुरालाई आज हामीले राम्ररी बुझनु परेको छ। समयका साथ आज हाम्रो पार्टी भित्र अनेक खराबी आएका छन्। तिनीहरूमध्ये केही प्रमुख खराबीहरूबारे म यहाँ तपाईँहरूलाई आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्न चाहन्छु। र्सवप्रथम क्रान्तिको सफलताले हामी सबैमा आवश्यकताभन्दा बढी एक किसिमको आत्मविश्वासको सिर्जना गर्‍यो। अनवरत कार्यद्वारा यसको पुस्ट्याई भएको भए सम्भव थियो, यसबाट त्यति नोक्सान हुने थिएन। तर अनेक कारणले त्यसो हुन सकेन। फलस्वरुप आजको हाम्रो निर्रथक आत्मविश्वास हाम्रो बाटोको तगारो हुनगएको छ। यसलाई हामीले हटाउनु परेको छ।
हाम्रो दोस्रो अवगुण के हो भने हामी प्रत्येक प्रश्नमाथि आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकाणले विचार गर्दछौँ। हामी आफ्ना चाहना र बानीअनुसार राष्ट्रिय वा पार्टी का समस्याहरूको हल खोज्दछौँ। तर्सथ, हाम्रा धेरैजसो निर्णयहरु आफ्ना व्यक्तिगत चाहना वा रूचि वा अरूचिका छाया मात्र हुन जान्छन्। यसलाई हामीले हटाउनु परेको छ। हाम्रो तेस्रो खराबी के हो भने हामीमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको उत्तरदायित्ववोध कम छ। यद्यपि, जिम्मेवारी उठाउने बारेको हाम्रो चाख भने कम छैन। यी कारणहरूले गर्दा हामी जनतामा बढ्ता भिज्दैनौँ। र, जनता र हाम्रावीचको सीमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यो हाम्रो चौथो दुर्गुर्ण हो। हाम्रा साथीहरूको पाँचौँ खामी के छ भने हामी आफूलाई अर्कै तहको र पार्टी का साधारण र सोझा कार्यकर्ताहरूलाई अर्कै तहको भन्ठान्छौँ। जनता र पार्टीकै कार्यकर्ताहरूवीचको यस किसिमको अन्तर पनि आज देखिन थालेको छ। हाम्रो छैठौँ खराबी भनेको साथीहरूमा अध्ययनको ठूलो कमि हुनु हो। हामीले इतिहासका बितेका घटनाहरूका प्रकाशमा वर्तमान राजनीतिको बाटो पनि पहिल्याउनु पर्दछ। हामी त्यसो गर्दैनौँ। उदाहरणका लागि पार्टीको घोषणापत्रसम्मको उपयुक्त ज्ञान नभएका धेरै साथीहरूलाई मैले देखेको छु। यसलाई पनि हामीले हटाउनु परेको छ।
अब म तपाईँहरूलाई मैले देखेको पार्टीको सातौँ र अन्तिम खराबी लेख्छु । साथीहरूमा उत्कर्षर सङ्कट, दुवै कालमा नैतिकताको अभाव भयो भने त्यसको ह्रास निश्चित छ। राजनीति र नैतिकता दुइ भिन्न तत्व हुन् र सफल राजनीतिका लागि नैतिकताको आश्रय लिनु आवश्यक छैन भन्ने एकथरि विचार तपाईँहरूले पनि अवश्य नै सुन्नुभएको होला। यस विचारबाट अलि बढ्ता प्रभावित भएका कसै-कसैको भनाइ त के पनि छ भने सफल राजनीतिका लागि नैतिकता वाधक मात्र हुन्छ। एउटा अर्का थरिको भनाइ के छ भने नैतिकता विनाको राजनीति र्सवथा पापाचार मात्र हो। एउटा विचारमा नैतिकताको अभावलाई नै राजनीतिक सफलताको पूँजी भनिएको छ। त्यहाँ यसमाथि आवश्यकताभन्दा ज्यादै बढी ध्यान दिइएको छ। राजनीति भनेको मोक्षको मार्ग होइन। पार्टी मुक्षुहरूको दलजस्तो निस्पृह र निर्विकल्प हुन सकेन भनेर कसैले गुनासो गर्दछ भने त्यो उसको मुर्खता हो । मेरो भनाइको तार्त्पर्य के हो भने माथिका नैतिकताका बारेका दुबै दृष्टिकोण अतिवादका उदाहरण मात्र छन्। राजनीति र नैतिकताको एउटा उपयुक्त समन्वय खोज्ने अवसर आज नेपाली राजनीतिमा आइसकेको छ। म चाहन्छु, देशको राजनीतिमा अग्रणी, हाम्रो पार्टीले नै यसबारे पनि एउटा नयाँ बाटो र सर्वथा अभिनव प्रयोग प्रारम्भ गर्नुपर्छ। र, कसले भन्न सक्छ, यसको प्रभाव कालान्तरमा हाम्रो देशको सीमा नाघेर बाहिर फैलने छैन ? साधारण जीवनमा नैतिकताको स्थान भएजस्तै राजनीति पनि जीवनकै एउटा भाग भएको हुनाले नैतिकताविनाको राजनीति निर्रथक र अलिनो हुन्छ। र, त्यस हुनाले अग्राहृय हुन्छ। हामीले साथीहरूवीच नै असत्यको प्रचार गर्‍यौँ, गैर-इमान्दार भएर काम गर्‍यौँ र आपसमा अविश्वास गर्‍यौँ भने हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको सङ्घर्षमय शुष्क जीवनको संवल नै के रहन्छ र ? नैतिकताका बारे ठूलो भाषण दिने मेरो इच्छा छैन। मनुष्य आफै एउटा अत्यन्त कमजोर र निरीह प्राणी हो। तर कस्तै सङ्कटका अवसरमा पनि हामीले यी मानवोचित गुणहरूलाई भुलेनौँ भने घोर अन्धकार र निरासाका अवसरमा पनि यसको क्षीण प्रकाशले हामीलाई जीवित र उल्लासमय बनाइराख्ने छ।
माथि नै मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु, ममाथिको तपाईँको ठूलो विश्वास, मैत्री र सद्भावनाका भरोसाका कारणले मात्र मैले तपाईँहरूलाई यस्तो किसिमको व्यक्तिगत पत्र लेख्ने धृष्टता गरेको हूँ। यस पत्रको आशय सारा कमजोरीहरूका कारण तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने होइन । साँच्चै भनौँ भने यी कमजोरीहरूको सबैभन्दा बढी उत्तरदायित्व ममाथि छ। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय कमजोर भएको छ। कुन समयमा कुन काम हुन्छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन । यसको जिम्मेवारी पनि धेरैजसो ममाथि नै जान्छ । यसलाई हामी सबै मिलेर हटाउनु छ। स्थिति अझै नसुध्र्रिने लायक भएको छैन । हामीहरूले अनेक पटक जीवन मरणका सवालमा काँधमा काँध मिलाएर देशका दुश्मनहरूसँग जीवन मरणको युद्ध गर्‍यौँ । भविष्य अत्यन्त अनिश्चित भए पनि त्यस समयको हाम्रो कर्तब्यपरायणता र मैत्री, एकता र उदारताको आज अभाव हुनगएको छ। यसलाई हामीले आज पुनः प्राप्त गर्नु परेको छ। त्यो अझै बढी त्याग र बलिदानले मात्र प्राप्त हुनसक्छ । अनि मात्र देशमा प्रजातन्त्रको विकास हुनेछ र समाजवादको मार्ग प्रशस्त हुनेछ। अनि मात्र हाम्रो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व पूरा हुनेछ। (नेपाली काङ्ग्रेसको मुखपत्र ‘नेपाल पुकार’ को २०१५ अङ्कबाट)